Religious Shongwe chena Candle - China Litbright Candle (shijiazhuang)
Basic Info Model No .: G25-0830H Type: Tapered Material: Paraffin Wax Usage: Funeral, Holiday, SPA, Religion, Wedding, Party, Birthday, Home Lighting, Decoration Rinoshanda: Lighting Color: White Preferencias: Unscented Size: 7 * 10cm Kwerusenzi Time: 8H Processing: Mould Long Rinopfuta Time: Mabhokisi Different kavha Additional Info Packaging: bhokisi kavha negoho: matani 30 Brand: Litbright Transportation: Ocean, Land, Air Nzvimbo Origin: China Supply Mano: 3 × 20 'fcl pazuva Chitupa : BS ...
Long NEAND Time: Different Boxes kavha
Kavha: bhokisi kavha
Negoho: matani 30
Supply Mano: 3 × 20 'fcl pazuva
Chitupa: BSCI BV CE
Bright makenduru vari paraffine wakisi, zviri ruvara iri chena, Chokwadi nemiwo aigona kusarudza vamwe mavara. Tinogara kuita 8 chidimbu chete bhokisi mabhokisi 30 paminiti ctn, kana mabhokisi 50 paminiti ctn chiputiriso. muchiso rako rakanaka. Mwenje iri rakashandiswa kudya nguva, chiedza shongedza muimba yako kudanana chaizvo uye uchava dzikama pachako munguva yako kudya nguva, chomwenje hakuna kunhuwira kana kwete utsi.
Type: inopenya kenduru
Nzvimbo Origin: Iye BEI, China (Mainland)
6pcsx60box, 8pcs X 30boxes / ctn uyewo maererano vatengi zvinoda.
Production capacity: 4x20ft / zuva
tine rokutsanya chaizvo pakukurukura nguva,
unhu uye anonzwisisa mutengo.
mhuri makenduru, kure kudzora flameless akatungamirira mwenje, mwenje muna girazi chirongo, inopenya makenduru, tealight makenduru, mbiru makenduru, chipo makenduru, makenduru, vechiJudha makenduru, bhora makenduru, taper makenduru, votive makenduru.
Previous: Cotton nembato uye paraffine wakisi kenduru
Next: White makenduru kuti 100g kubva 10g
No misodzi hapana utsi chena pachivara kenduru
India mhuri makenduru
White makenduru kuti 100g kubva 10g
2018 nevakawanda magadzirirwo flameless chena mhuri C ...